नेपाली यौन कथा अनलाईन : हाम्रो पहिलो अनुभब्
हाम्रो पहिलो अनुभब्
रेखा र म सानै देखिको साथी थियौ । हामी साथमा नै स्कुल आउने जाने गर्थेउ । हाम्रो अरु साथी त्यती थियन । सधै साथ्मा हुने हुनाले हामी सबै कुरा मा फ्र्यान्क नै थियौ । साथै हाम्रो बिच कुनै असमझादारी थियन । कुरा हामी यस यल सि दिई सक्कयार बसेको बेलाको हो । मेरो अनि रेखा को पनि कुनै काम थियन । न हामिले कुनै यक्स्ट्रा कोर्स गरेउ न कतै टाढा घुम्न नै गयौ । यस यल सि सकेको १ हप्ता पछी नै मलाई के पढ्ने भनेर बोर हुन थाले । मैले अब मोटो मोटो अङ्रेजी का नोबल हरु पेढ्न थाले ।नोबल किन्दा फेरी मैले नेपाली मा लेखेको २-३ वटा छाडा उप्न्यास पनि किनेको थिय । त्यो पनि पदे । अब मैले जे गर्थे पढ्थे त्यो त रेखा लाई सबै थाहा हुनेनै भो । उस्ले पनि म सँग सोध्दै नसोदी छाडा उप्न्यास पनि पढाई गरिछे ।म लाई पनि हल्का उपन्यास्को रन्को चढि सकेको थ्यो । मैले सोधे कस्तो रहेछ त्यो उपन्यास ? तस्तो जे पि टि, रहेछ । तर मजा आयो भन्ने उत्तर दिई रेखा ले । बस मैले कुरा बुझे कि अब म जस्तै रेखा पनि योउन मा इक्छा राख्न थालिछे भनेर । हुन त केटी हरु लाई चाडै बैस आउछ होला । त्यसैले मैले पनि उ अब कुनै नाई नस्ती गर्दिना होली भनेर यकदिन म उन्कै कोठामा गय । सायद घर मा कोही पनि थियनन जस्तो थियो ।तर रेखाको मम्मी भय पनि म लाई खुब माया गर्नु नै हुन्थ्यो । मैले सुनिता लाई भने के गरेको नि आज ? उस्ले कुनै काम नभयार त्यसै पल्टेर बसेको नि । मैले भने त्यसो भने ल हामी दुबै जना मिलेर यो नयाँअ उपन्यास पढ्औ न त । उस्ले अलि अफ्ट्यारो मानेर मुन्टो हल्लाई । अब हामिले उपन्यास मा भएको हट कथा हरु पढ्न थलेउ । मैले त खप्न नस्केर बिस्तारै रेखाको सारीर छुन थाले । मेरो घुडाले रेखाको दुधमा स्पर्श गर्न थाले । उनी पनि थाहा नपाए झै गरी रहिन । मेरो तनमन आन्दोलित हुँदै गयो, उनी रातोपिरो हुँदै गइन । यो नै शायद रेखाको मौन स्विक्रिती थियो .
हाम्रो वेभ साईट लुकेको समाज बाट कारीब ५० भन्दा बढी का काईते फेसबुक पेज हरुले कथा कपी गरी पेस्ट गरेका अनि ३० भन्दा बढी चोर वेब साईट ले त पुरा स्टाटस सहित कपी पेस्ट गरेको देखिन आयको छ ।त्यस्ता चोर हरुको कारीब आधा भन्दा बढी फेसबुक पेज हालसाल नै बन्द गरियका छन र अरु पेज हरु पनि छिट्टै बन्द हुने हुने छन । वेब पेज पनि बन्द गरिने भयको छ । त्यसैले आफ्नो पेज तथा वेब साईट बचाउन छ भने तुरुन्त कथा चोरी गर्न बन्द गर्न सबै चोर हरु लाई धम्की दिन चाहन्छु । वेब कन्टेन्ट कपिराईट्स भन्ने पनि चिज हुन्छ जस्ले सर्जक को सिर्जना सुरक्षा गर्छ । यो नेपालको कानुन होईन जे गरे पनि हुने । हेर्दै जाउ चोर हरु
म रेखालाई बिस्तारी सुम्सुम्यारेखा थाले । रेखाले आँखा बन्द गरी सकेकी थिन म झन आतुर भए मेरो ओठ रेखाको पिपलपाते ओठमा लगेर चुम्न थाले उनी पनि त्यसै गर्न थालिन यती बेला सम्म उनी मेरो बाहुपासमा कसिएकी थिन म लिन थिए रेखालाई उत्कर्शमा पुर्याीरेखा उनी पनि मेरो अनुसरण गर्दै थिइन । मैले बिस्तारै बिस्तारै रेखाको दुध सर्ट बाहिरैबाट माडन थाले । त्यती बेला सम्म रेखाको फर्क फर्केर रातो पेन्टी देखिदै थियो अब मेरो हाथ रेखाको त्यो कोमल तिघ्रामा सल्बलारेखा थाल्यो । रेखाको गुप्तान्ङको सुगन्ध आइरहेको थियो । म झन लठ् हुँदै थिए । रेखाको योनि छाम्नलाई मेरो हात रेखाको पेन्टी भित्र छिराए, रेखाको योनी रसाएको थियो । रौ अली अली भएको महसुस गरे अनी मेरो औंला रेखाको गुप्तान्ङ भित्र बाहिर गर्न थाल्यो, उनी शिथिल हुँदै मेरो काखमा लडिन । मेरो लिङ तेसै त ९० डिग्रीमा खडा भएको थियो । शायद मेरो लिङले रेखालाई बिझाए छ अनी रेखाले पनि बाहिरबाटै लिङ सुम्सुम्एरेखा थालिन । तर रेखाको अनुहार पढदा लाग्थियो उनी मेरो लिङ रेखाको योनीमा पसारेखा आतुर थिइन बिस्तारी बिस्तारी रेखाको सटको बटनहरु खोल्न थाले, रेखाको मुहार अझ मदहोस् देखिन्थियो । गुलाबी ब्रा लगाएकी रहिछन रेखाको दुध त्यस्मा उम्कौला झै गरेर कसिएको थियो सुम्सुम्यौदै त्यसलाई पनि खोली दिए गुलबी दुधका मुन्टा म तिरनै घोचौला झै ठाडो थियो । अब यवम रितले उन्को फर्क पेन्टी सबै फुकाले । अब उनी मेरो सामु निर्शत्र भइन अनी रेखाको योनीमा मेरो लिङ पसारेखा आतुर थिए । म पनि फटाफट लुगा खोल्न थाले उनी टोलाएर हेरदै थिइन शायद मेरो लिङ्को आँकार देखेर झस्किन मैले ।अब म उनी माथि खप्टिए र बिस्तारि लिङ रेखाको योनीको मुखमा लगेर छिराए तर मेरो लिङको टुप्पो मात्र छिर्यो उनी करारेखा थालि अह्ह मरेनी अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह मैले लिङ निकल्नै पर्योा । अनी मैले मेरो लिङ मा थुक लगाए र पुन रेखाको योनिमा लगेर रखे चुम्न थाले रेखाको पिपल पाते ओठ यसो गदा रेखा म जोस आए छ अनी भन्न् थालि बिस्तारि छिराउनुन अनी मैले बिस्तारि बिस्तारि गर्दै मेरो लिङ लाई जोडले ढक्का दिए उनी डल्लो परिन मरेनी मेरे अह्ह अह्ह अह्ह दुख्यो भयो भन्न् थालि म कहाँ छडनेवाल थिए अझ जोड जोडले धक्का दिन थाले । शायद रेखाको पनि पिडा कम भए छ क्यर उनी पनि मुनी बाट साथ दिन थालि । यस्तै ४ -५ मिनेट पछी मेरो लिङ बाट पानी निस्कियो । मेरो ठेलाई कम हुँदै गयो ।